Discussion-kevitra tao foto-kevitra fivoriana 16/1 | Holmbygden.se
Discussion-kevitra tao foto-kevitra fivoriana 16/1
Posted on 18 Janoary, 2013 ny Holmbygden.se
Här är antecknade diskussionspunkter som berördes vid onsdagens idé-mötet på Österström, 13/1 2013. Det var ett givande möte med många kloka ord från ett tjugotal Holmare. Nytt på hemsidan är att tidigare mötesanteckningar har samlats under sidan “Fivoriana sy minitra” (där tidigare endast HBU:s protokoll funnits).
Survival fanofanana Thomas Åslin natao teo anatrehan'i Krismasy nisarika be dia be ny olona sy tombony lehibe ho an'ny fiarovana ny Holm. Mety ho fampiofanana amin'ity taona ity.
Wind turbine natao ambanivohitra vola bevakas för Holmborna av Dan Johansson. No foana in mifandray aminy sy manaiky, ankoatra ny hafa. lalana ho any Nötåsen nisoroka. Fametrahana Ireo andry tokana harodana sy ny fanorenana tamin'ny Febroary ho avy. Ny raharaham-barotra dia afaka miandry fikambanana sy ho hitantsika izay fikambanana amin'ny teny sahaza indrindra mba hahazoana vola fanampiana ambanivohitra. Ny fandraisana anjara dia ho soa na inona na inona ny distrika iray manontolo.
Dan informerade mer om läget med Senior Home sy Mpampianatra ny Housing.
izany vidiny ONLY 30 SEK mba hahazo ny kitapo ny entana hemkördfrån Ica Liden alalan'ny servicelinjen. Hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba hanaovana izany.
Tommie teny amin'ny Björn Nordling – Mittland ho avy ny olona hiresaka momba ny Mpitarika tetikasa (tany Bygdsiljum bidrag). Izy tsy afaka nanatrika androany. manandrana indray.
Macken Mihidy hatrany. Asa foana safidy / lease hodinihina!
Tetikasa Leader Niresaka ho toy ny vahaolana hitondra ny plurality ny tetikasa ao amin'ny faritra ankehitriny ohatra. raharaham-barotra / Mack, fanitarana haingam-pandeha / telephony, hitoetra ao (m.h.a. Heico Basten). Fohifohy mahatonga an-toerana 30 % ny vola lany ary hahazo ny sisa amin'ny fanohanana mamela ny. 30 %-ny vola ampy ho tombany no asa an-tsitrapo. Inspiration avy amin'ny tetikasa hafa dia hita ao amin'ny landsbygdsnätverkets projektdatabas.
Soso-kevitra azo atao. fianarana na fahazoana fahalalana avy amin'ny Alby ary Ljustorp ny fomba mihazakazaka solika toby / fivarotana.
Mampihomehy fa vaovao Ankizikely nifindra tany Holm. Tokony ny fanaramàna ny Lars-Åke Sundberg. More foana trano dia entanina mba miezaka ny manofa avy, aza misalasala fianakaviana amin'ny ankizy. Ny fomba tsara “Ohab-Bo” ary avy eo raha ilaina. afaka mividy.
Jereo trano amidy sy ny fanofana.
Site AD endri-javatra for nyhet ary kalender no nanomboka ampiasaina, Bra!
fiara fitateram-bahoaka Tours niresaka. More mandehana ankehitriny noho ny 2008, Na dia kelikely kokoa mponina. Ary toy izany koa mandeha fiara fitateram-bahoaka isan-isa ny Kovland avy Indal Liden ho Holm. More zokiolona mandeha fiara fitateram-bahoaka ankehitriny Holm ny tanàna, fa miantsena in Birsta M.M.. satria io ihany no vidin'ny 100SEK / volana (!!) för dem att åka buss inom hela kommunen. Fanapahan-kevitra momba izay azo atao. turändringar no ho ny. Mampihomehy ampy, te Filan-kevitry ny County te-manapaka indray 30% ny fiara fitateram-bahoaka, ny Kaominina raha te-avo roa heny ny fitateram-bahoaka 2020. Tsara fanohanana afovoan, misy ny ambanivohitra sy Holm. Read more about commuting Holm-Sundsvall.
Comments na ändingsförslag eo amin'ny fiara fitateram-bahoaka / fotoana fiara fitateram-bahoaka dia mandray foana nanipika Tommie mihazakazaka lavidavitra; tommie@trapatronen.se .
Liden gazety, izay koa nivoaka tamin'ny Holm, nangataka fanazavana bebe kokoa ny singa, ary hanaiky amim-pifaliana kokoa ny soso-kevitra avy amin'ny Holm pejy.
Ny ranomandry dia tsy tokony ho amin'ny taona maro menamenan'ny, fa ankehitriny ireo tompon'andraikitra fangatahana mbola nanomboka hanondrahana. Nisy ny ankizy mba handeha eo alohany amin'ny ranomandry malalaka ary ankehitriny natao ihany koa “mikorisa amin'ny Disco” ny Zoma alina ho an'ny lehibe na kely!
Manana vao haingana voasoratra soratra sy ny feonkira in Holm ho ho avy sarimihetsika famotsorana. Ireo fitaomam-panahy dia nalaina avy amin'ny tontolo iainana tsara tarehy niakatra eto.
Jessica Falk -tena tamin'ny famoronana feonkira.
Next Holm-pivoriana fotoana / daty tsy mbola tapa-kevitra, jereo eto ambany.
Ny fanaovana ny fivoriana manaraka:
– Tommie jereo indray Björn Norling raha toa ary rehefa afaka ny ho tonga amin'ny fivoriana manaraka ny mpitarika ny tetikasa hiresaka momba mpitarika, Avy eo dia manapa-kevitra ny fotoana sy ny daty.
– Janne Vinroth maso maika amin'ny Alex raha azo atao ny hanofa ny gara / paompy mandra-pisian'ny filazana. Fivoriana iray aloha ho ela dia mety ho ilaina izany.
– Niklas misedra teo aloha liana, Janne, av affärn och visar bygdens intresse.
– Gunilla miresaka amin'ny Ica Kovland ny liana tamin'ny Hall Holm ny sampana.